တစ်ယောက်တည်းစကားပြောတတ်တာဟာ စိတ်ရောဂါတစ်ခုလား။ - Page 19 of 30 - Hello Sayarwon
Dr. Thin Yadanar @ Frances မှ ရေးသားသည်။2ရက် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
တစ်ယောက်တည်း ကိုယ့်ဘာသာစကားပြောခြင်း။ လူတိုင်းမဟုတ်တောင် အများစုကတော့ တစ်ယောက်တည်း ကိုယ့်ဘာသာ စကားပြောတာတွေ လုပ်ဖူးကြမှာပါ။ တချို့တွေပြောကြတာရှိတယ်။ တစ်ယောက်တည်း စကားပြောနေတယ်။ ရူးသွားပြီလားပေါ့။ အဲလို အပြောခံရတာတွေ ကြုံဖူးမှာပါ။ အဲဒါက လူကြားထဲ အဲလို ပြောမိလို့ပါ။ လူတွေအများကြီးရှိနေချိန်တော့ မပြောနဲ့လေနော်။ စိတ်လည်းကောင်းတယ် ရူးလည်းမရူးဘူးဆိုတဲ့ သူတွေက တော့ လူကြားထဲ တစ်ယောက်တည်း စကားပြောမနေတတ်ပါဘူး။ အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့ အချိန်၊ အိမ်သာတက်နေတဲ့အချိန်၊ လူတွေအိပ်နေတဲ့ အချိန် ကိုယ့်အခန်းထဲ အိပ်ရာပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်း ကိုယ့်ဘာသာ စကားပြောနေတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ ရှိဖူးမှာပါ။ တစ်ချို့ဆို အဲလို တစ်ယော့က်တည်းပြောနေတတ်တာ အကျင့်လိုကိုဖြစ်နေတာ။ သူများတွေ ပြောသလိုပဲ တစ်ယောက်တည်း စကားပြောတဲ့သူတွေက စိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်လား။
လေ့လာချက်တွေအရ တစ်ယောက်တည်းစကားပြောနေတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိသူတွေဟာ စိတ်ရောဂါသည်တွေမဟုတ်( ယဉ်ယဉ်လေးရူးနေတဲ့သူတွေ မဟုတ်)ပဲ ညဏ်ကြီးရှင်တွေပါတဲ့။ ကိုယ်လည်း အဲ့အထဲ ပါနေရင် ဝမ်းသာလိုက်တော့။ ကမ ္ဘာပါ်က အကျော်အမော် သိပ္ပံညာရှင်ဖြစ်တဲ့ အိုင်းစတိုင်းဆိုရင် လည်း တစ်ယောက်တည်းစကားတိုးတိုးလေး ပြောနေတတ်တဲ့ သူပါတဲ့။ ကဲ အဖော်တွေ့ပြီဆိုတော့ ဝမ်းသာလိုက်တော့။ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်း ဖွင့်မပြောကြတာသာရှိမယ်။ ကျိတ်ပြီးပြောနေတတ်တဲ့ သူတွေရှိရင်ရှိမှာ။ သူတို့တွေက ရူးနေတဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူးနော်။ ညဏ်ကြီးရှင်တွေ။
ခုပြောချင်တာက တစ်ယောက်တည်း စကားပြောခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၅) ချက်ပြောပြပေးမယ်နော်။
၁ ။ တစ်ယောက်တည်းစကားပြောခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြီးအားပေးရာရောက်တယ်။
ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အခက်အခဲတွေကြုံနေရတဲ့ အချိန်၊ အားပေးမယ့် သူတွေမရှိတဲ့အချိန်၊ တစ်ယောက်တည်းရှိနေချိန်မှာ “ငါလုပ်နိုင်တယ် ငါကျော်ဖြတ်နိုင်တယ် အေးဆေးပဲ” ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာတင်ပြောတာမဟုတ်ဘဲ ပါးစပ်ကပါ ထုတ်ပြောလိုက်တော့ ကိုယ့်အသံကိုယ်ပြန်ကြားပြီး အားတက်သွားတယ်ဟုတ်။
၂ ။ ဦးနှောက်ကိုလည်း အဆက်မပြတ် အလုပ်ပေးနေတယ်။
သင် ဈေးသွားဝယ်တဲ့အခါမှာ ဝယ်ရမယ့် ပစ္စည်း၊ လုပ်စရာရှိတဲ့ ကိစ္စတွေကို ထပ်တလဲလဲ ရွတ်ဖြစ်တာမျိုး ကြုံဖူးမှာပါ။ ပြောတတ်တဲ့ ပုံစံတွေကတော့ “ပေါင်မုန့် ပေါင်မုန့် ဘယ်နားမှာလဲ ဟော တွေ့ပြီ” “ ဆပ်ပြာမှုန့်လည်း ဝယ်ရဦးမယ် တော်သေးလို့ မေ့တော့မလို့” ဆိုပြီး တစ်ကိုယ်တည်းကြားရုံ တိုးတိုးပြောလိုက်တာက ဦးနှောက်ကို အဆက်မပြတ် အလုပ်ပေးရာရောက်တယ်။ မေ့လည်းမမေ့တော့ဖူးပေါ့။
၃ ။ မကျေနပ်ချက်များကို ဖွင့်ချနိုင်။
တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်အပေါ် အနိုင်ကျင့် ဆူဆဲတယ်ဆိုပါစို့။ အဲ့ဒီလူက ကိုယ်ပြန်ခံပြောလို့မရတဲ့ လူတစ်ယောက်လဲ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကတစ်နေရာကိုသွားပြီး အဲ့လူအပေါ် မကျေနပ်ချက်တွေကို တစ်ယောက်တည်း ပွစိပွစိ ပြောပစ်လိုက်တာမျိုး လုပ်ဖူးကြတယ်မလား။ အဲလို လုပ်လိုက်တာက ခံစားနေရတဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေ လျော့သွားနိုင်ပါတယ်။
၄ ။ ကိုယ့်ခေါင်းထဲက အတွေးတွေကို ပြန်ကြားနိုင်တယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ခေါင်းတွေရှုပ်ပြီး ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတဲ့ အချိန်တွေ ရှိခဲ့ဖူးမှာပါ။ အဲ့ အချိန်ဆို တစ်ယောက်တည်းစကားပြောတတ်သူတွေက “ ငါ ဘာတွေလုပ်နေတာပါလိမ့်။ ကဲခေါင်းအေးအေးထား၊ ဒီလိုလုပ်ကြည့်၊ အဆင်မပြေရင်လည်း နောက်တစ်မျိုးပြောင်းပေါ့။” အဲလိုပြောလိုက်တာက ကိုယ်ဘာတွေးနေတယ် ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ လမ်းစပြန်ပေါ်လာတာယ်။ ခေါင်းကို ရှင်းပေးဖို့ ကိုယ့်ဘာသာ သတိပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။
၅ ။ ပြောရမည့် စကားတွေ အဆင်ချောသွားတယ်။ မှတ်ညဏ်ကောင်းစေတယ်။
ပွဲတစ်ခုမှာ ကိုယ်ကပြောရမယ့်သူဆိုရင် “ပွဲမဝင်ခင် အပြင်ကကျင်းပ” ဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ပြောနေရမည့်စကားတွေကို တစ်ယောက်တည်း တစ်တွတ်တွတ်ရွတ်နေရင် စင်ပေါ်ကျရင် အဆင်ချောသွားရော။ စာအသံထွက်ကျက်တာလည်း ဒီသဘောပဲပေါ့။ အာရုံစူးစိုက်ရတာလည်း ပိုကောင်းသွားတယ်။ ကိုယ့်အသံကို ပြန်ကြားနေရတော့ အာရုံမပြန့်တော့ဘူးပေါ့။
ခုပြောခဲ့တာတွေကတော့ တစ်ယောက်တည်း စကားပြောတတ်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ကလည်း တစ်ယောက်တည်း စကားပြောတတ်တဲ့ အထဲ ပါနေရင် တော့ ဝမ်းသာလိုက်နော်။ ယဉ်ယဉ်လေးရူးနေတာ မဟုတ်ဘူး ညဏ်ကြီးရှင် လေးတွေပါလို့။
Surprising Benefits of Talking to Yourselfhttps://spiritualityhealth.com/articles/2014/05/14/9-surprising-benefits-talking-yourself# Accessed date 14.8.2018
Is talking to yourselfasign of mental illness? An expert delivers herverdicthttp://theconversation.com/is-talking-to-yourself-a-sign-of-mental-illness-an-expert-delivers-her-verdict-77058Accessed date 14.8.2018